साँचो परमेश्वर को हुनुहुन्छ? | सुसमाचार
लेखको भाषा cakchiquel (central) अकोली अङ्ग्रेजी अजरबैजानी अजरबैजानी (सिरिलिक) अजा अज्ये अटेसो अट्टी अड्होला अफ्रिकान्स अबुइ अब्खाज अब्बे अमेरिकी साङ्केतिक भाषा अरबी अरबी (ट्युनिसिया) अरबी (मोरोक्को) अर्जेन्टिनियन साङ्केतिक भाषा अलुर अल्बेनियन अल्बेनियन साङ्केतिक भाषा अवाजुन अस्ट्रियन साङ्केतिक भाषा अस्ट्रेलियन साङ्केतिक भाषा आइरिस आइसल्याण्डिक आउकान आएमारा आम्हारिक आर्मेनियन आर्मेनियन (पश्‍चिमी) आसामी इक्वेडरियन साङ्केतिक भाषा इग्बो इटालियन इटालियन साङ्केतिक भाषा इनाकिनन इन्डोनिसियन इन्डोनिसियन साङ्केतिक भाषा इबान इबानाग इबिन्डा इलोको इसोको ईवी उइघुर (सिरिलिक) उङ्गान्गेला उङ्गाबेरे उज्बेक उज्बेक (रोमन) उन्डुबेली उन्डुबेली (जिम्बावे) उम्बुन्डु उरुन्ड् उर्दू उर्होबो एङ्गोलन साङ्केतिक भाषा एडो एफिक एम्बेरा (साटिओ) एसान एस्टोनियन एस्टोनियन साङ्केतिक भाषा ओक्पे ओटेटेला ओटोमी (मेक्सिकोको राज्य) ओडिया ओतोमि (मझक्विटल उपत्यका) ओरोमो ओसेसियन कन्नडा कम्बोडियन करेन (गः) काचिन काजाक काडाजान काबाइली काबीय काबुभरदियानु किकाओन्डे किकाम्बा किकुयु किकोंगो किनान्डे किन्यारवान्डा किपेन्डे किम्बुन्डु किरिवाती किरून्डी किर्गिज किलुबा किश किसी किसीई किसोंगे कुइचुआ (इम्बाबुरा) कुइचुआ (चिबुलेओ) कुइचुआ (टिना) कुइचुआ (पास्टाजा) कुइचुआ (सान्टिआगो डेल एस्टेरो) कुइचुआ (सिम्बोराजो) कुर्दीस कुर्मान्जी कुर्दीस कुर्मान्जी (ककेसस्) कुर्दीस कुर्मान्जी (सिरिलिक) कुर्दीस सोरानी केक्ची कोंकनी (देवनागिरी) कोंकनी (रोमन) कोंगो कोमोरियन (गाजिड्जा) कोरियन कोरियन साङ्केतिक भाषा कोलम्बियन साङ्केतिक भाषा कोस्टा रिकन साङ्केतिक भाषा कोस्रियन क्याटालान क्यानगोन्डे क्युबान साङ्केतिक भाषा क्यूबेक साङ्केतिक भाषा क्रिओ क्रोएसियन क्रोएसियन साङ्केतिक भाषा क्वान्गाली क्वान्यामा क्वेचा (अनक्यास) क्वेचा (आयाकुचो) क्वेचा (कुज्को) क्वेचा (बोलिभिया) क्वेचा (हुआल्लागा हुआनुको) क्षोसा खाना खासी गा गाउरानी गाउरानी (बोलिभिया) गारीफुना गालिसियन गिटोंगा गिम्बुन गियानिज क्रिओल गुएरे गुजराती गुना गुर्जे गून गोउरो गोकाना गौरमान्चेमा ग्रीक ग्रीक साङ्केतिक भाषा ग्रीनल्यान्डीक ग्वाटेमाला साङ्केतिक भाषा ग्वाडेलोपिएन क्रिओल घानायन साँकेतिक भाषा चङ्गाना (जिम्बावे) चाङगाना (मोजाम्बिक) चाभाकानो चामोरो चिचेवा चिटुम्बुका चिटोंगा चिटोंगा (जिम्बावे) चिटोंगा (मलावी) चिनियाँ क्यान्टोनिज (परम्परागत) चिनियाँ क्यान्टोनिज (सरल) चिनियाँ म्यान्डरिन (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (सरल) चिनियाँ साङ्केतिक भाषा चियाओ चिली साङ्केतिक भाषा चीन (कुकी) चीन (जोटुङ) चीन (टिडिम) चीन (हाका) चुकिज चुभास चुवाबो चेक चेक साङ्केतिक भाषा चोन्टाल (टाबास्को) चोपी चोल चोवे जर्जियन जर्मन जर्मन साङ्केतिक भाषा जान्डे जापटेक (इस्मस) जापटेक (ग्वेभा) जापटेक (भिल्ला आल्टा) जापटेक (लाचिगुइरी) जापानी जापानी साङ्केतिक भाषा जाभानिज जाभानिज (पूर्वीय) जाभान्टे जाराकू जुला जुलू झेल्तल टगालोग टर्कमेन टर्किश टाटार टान्ड्रयो टायरवुजु टालियन टिग्रिन्या टिभ टुभालुअन टेटन डिली टोंगन टोउपौरी टोराजा डच डच साङ्केतिक भाषा डाँग्मे डायाक आहे डायाक ङाजु डिगोर डुआला डुसुन डेनिश ड्रेहु तरहुमरा (मध्य) ताङ्काराना ताजिकी तामिल तारास्कान ताहिटी तेलगु तोआबाइट तोक पिसिन तोकलाउन तोजोलबल तोतोनक तोबा त्लापनेक त्वी त्सोंगा थाई थाई साङ्केतिक भाषा दामारा नजेमा नर्वेली नाइजेरियन पिजिन नाभाहो नामा नाह्वाटल (उत्तरी पुएब्ला) नाह्वाटल (ग्वेरेरो) नाह्वाटल (भेराक्रुज) नाह्वाटल (वास्टेका) नाह्वाटल (सेन्ट्रल) निआस निऊ निकारागुआन साङ्केतिक भाषा नेङ्गोने नेपाली नोंगा न्दौ न्यानेका न्यु जील्याण्ड साङ्केतिक भाषा न्युङ्वे पंगासिनन् पंजाबी पंजाबी (शाहमुखी) पलाअन पाइसी पानामानियन साङ्केतिक भाषा पापियामेन्टो (अरुबा) पापियामेन्टो (कुरासाओ) पारसी पाराग्वेयन साङ्केतिक भाषा पिजिन (क्यामरून) पिजिन (पश्चिम अफिका) पियारोआ पिलागा पुलर पेज पेन्सिल्भेनिया जर्मन पेमोन पेरुभियन साङ्केतिक भाषा पेल्ले पोनापियन पोमेरानियन पोर्चुगिज पोर्चुगिज (पोर्चुगल) पोर्चुगिज साङ्केतिक भाषा पोलिश पोलिश साङ्केतिक भाषा फटालुकु फन फान्टे फिजियन फिनिश फिनिश साङ्केतिक भाषा फिलिपिनो साङ्केतिक भाषा फुटुना (पुर्वीय) फुलफुल्डे (क्यामरून) फेरोई फ्रान्सेली फ्रान्सेली साङ्केतिक भाषा फ्राफ्रा फ्रिसियन बंगाली बम्बारा बाओले बाटाक (कारो) बाटाक (टोबा) बाटाक (डाइरी) बाटाक (सिमालुङ्गुन) बालिनिज बासा (क्यामरून) बासा (लाइबेरिया) बास्क बिकोल बियाक बिसाउ गिनियन क्रिओल बिस्लामा बुल्गेरियन बेटसिमिसाराका (उत्तरी) बेटसिमिसाराका (दक्षिणी) बेते बेलिज क्रिओल बोउलो बोलिभियन साङ्केतिक भाषा बोस्नियन ब्राजिलियन साङ्केतिक भाषा ब्रिटिश साङ्केतिक भाषा भलेन्सियन भारतीय साङ्केतिक भाषा भियतनामिज भेजो भेनेजुएलन साङ्केतिक भाषा भेन्डा मङ्ग (ह्वाइट) मङ्गोलियन मङ्गोलियन साङ्केतिक भाषा मझतेक (हुआट्ला) मझाहुआ मडागास्कर साङ्केतिक भाषा मनिपुरी मबुकुशु मराठी मरुसियन क्रिओल मलावी साङ्केतिक भाषा मले मलेसियन साङ्केतिक भाषा मल्यालम माकासाई माकुवा माकुशी माङ्गारेभा माडी मानिन्काकन (पूर्वेली) मानो मान्ड्जाक मापुडुङ्गुन माम माम्बे (एर्मेरा) माम्ब्वे-लुंगु माया माया (मोपान) मायो मार्क्युसियन (नुकू हिभा) मार्क्युसियन (हिभा ओ) मार्शलिज मालागासी माल्टिज मिक्सटेक (ग्वेरेरो) मिक्सटेक (ट्लाक्जियाको) मिक्सटेक (ह्वाजुआपान) मिङ्रेलियन मिजो मिस्किटो मिहे मूर मेक्सिकन साङ्केतिक भाषा मेन्डे मेरू मोजाम्बिकन साङ्केतिक भाषा मोटु म्यानमार म्यासडोनियन याकुबा युक्पा युक्रेनियन योरूबा रापा नुई रारोतोंगान रियुनियन क्रिओल रुटोरो रुन्यानकोर रूङ्गुस रूमान्यो रूसी रूसी साङ्केतिक भाषा रोमानियन रोमानियन साङ्केतिक भाषा रोमानी (अर्जेन्टिना) रोमानी (अल्बेनिया) रोमानी (उत्तरी ग्रिस) रोमानी (दक्षिणी ग्रिस) रोमानी (पूर्वी स्लोभाकिया) रोमानी (बुल्गेरिया) रोमानी (म्यासेडोनिया) रोमानी (म्यासेडोनिया) सिरिलिक रोमानी (रोमानिया) रोमानी (सर्बिया) रोविअना लक्जमबर्गियन लहु लाओशियन लाट्गालियन लाट्भियन लाट्भियन साङ्केतिक भाषा लाम्बा लिंगाला लिथुआनियन लुओ लुकोन्जो लुगान्डा लुग्बारा लुन्डा लुभेल लेन्जे लो जर्मन लोभारी लोम्वे वलिसियन वाउ वायुनाइकी वाराओ वारे-वारे वास्टेक (सान लुइस पोटोसी) विची वेजेवा वेल्श वोलफ वोलाइटा शिपिबो-कोनिबो शिलुबा शुअर शोना श्वा सङ्गीर सरमक्कन सर्बियन सर्बियन (रोमन) सर्बियन साङ्केतिक भाषा साङ्गो सामि (उत्तरी) सामोअन सार्नामी साल्भाडोरन साङ्केतिक भाषा सिंहला सिडामा सिनयान्जा सिनाम्वांगा सिबेम्बा सिलोजी सुन्डा सुसु सेत्स्वाना सेना सेनोउफो (सेबारा) सेन्ट्रल अलस्कन युपिक सेपुलाना सेपेडी सेबूआनो सेरेर सेसेल्स क्रिओल सेसोथो (दक्षिण अफ्रिका) सेसोथो (लेसोथो) सोट्सेल सोमाली सोली सोलोमन टापु पिजिन स्पेनिश स्पेनिश साङ्केतिक भाषा स्रानानटोंगो स्लोभाक स्लोभाक साङ्केतिक भाषा स्लोभेनियन स्लोभेनियन साङ्केतिक भाषा स्वाती स्वाहिली स्वाहिली (कंगो) स्विडिस स्विडिस साङ्केतिक भाषा स्वीस जर्मन साङ्केतिक भाषा हंगेरियन हंगेरियन साङ्केतिक भाषा हङकङ साङ्केतिक भाषा हन्स्‌रिक हाइटियन क्रिओल हाया हिन्दी हिब्रू हिरी मोटु हिलिगेनोन हेरेरो हेहे होण्डुरस साङ्केतिक भाषा हौसा
१. हामीले किन परमेश्वरको उपासना गर्नुपर्छ?
सम्पूर्ण कुराहरूको सृष्टिकर्ता नै साँचो परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँको सुरुवात पनि छैन र अन्त पनि छैन। (भजन ९०:२) बाइबलमा पाइने सुसमाचारको स्रोत उहाँ नै हुनुहुन्छ। (१ तिमोथी १:११) परमेश्वर हाम्रो जीवनदाता हुनुभएकोले हामीले उहाँको मात्र उपासना गर्नुपर्छ।—प्रकाश ४:११ पढ्नुहोस्।
२. साँचो परमेश्वर कस्तो हुनुहुन्छ?
परमेश्वर अदृश्य हुनुहुन्छ। त्यसैले कुनै मानिसले उहाँलाई कहिल्यै देखेको छैन। यसको अर्थ हो, उहाँ पृथ्वीमा भएका सबै प्राणीभन्दा उच्च हुनुहुन्छ। (यूहन्ना १:१८; ४:२४) तैपनि उहाँले बनाएका कुराबाट उहाँ कस्तो परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर हामी बुझ्न सक्छौं। जस्तै: किसिम-किसिमका फलहरू र रङ्गीचङ्गी फूलहरूमा उहाँको माया र बुद्धि देखिन्छ। विशाल ब्रह्माण्डले उहाँ कत्तिको शक्तिशाली हुनुहुन्छ भनेर बताउँछ।—रोमी १:२० पढ्नुहोस्।
बाइबल पढेर परमेश्वरको व्यक्तित्वबारे हामी अझ धेरै सिक्न सक्छौं। बाइबलबाट हामी यस्ता कुरा सिक्न सक्छौं: परमेश्वरलाई के मन पर्छ र के मन पर्दैन; उहाँ मानिसहरूसित कस्तो व्यवहार गर्नुहुन्छ र विभिन्न अवस्थामा जस्तै, हामीबाट गल्ती हुँदा उहाँ कस्तो प्रतिक्रिया देखाउनुहुन्छ।—भजन १०३:७-१० पढ्नुहोस्।
३. परमेश्वरको नाम छ?
येशूले भन्नुभयो: “हे स्वर्गमा बस्नुहुने हाम्रा बुबा, तपाईंको नाम पवित्र पारियोस्।” (मत्ती ६:९) हुन त परमेश्वरका पदवीहरू धेरै छन्‌ तर उहाँको नाम भने एउटा मात्रै छ। भाषाअनुसार परमेश्वरको नाम फरक-फरक तरिकाले उच्चारण गरिन्छ। नेपालीमा यस नामलाई “यहोवा” भनेर उच्चारण गरिन्छ। तर कोही-कोही “यहवे” भनेर पनि उच्चारण गर्छन्‌।—मर्कूस १२:२९ पढ्नुहोस्।
थुप्रै बाइबलबाट परमेश्वरको नाम हटाइएको छ र त्यसको सट्टामा प्रभु वा परमप्रभु जस्ता पदवी राखिएको छ। तर सुरुमा बाइबल लेखिंदा परमेश्वरको नाम झन्डै ७,००० पटक उल्लेख गरिएको थियो। येशूले मानिसहरूलाई परमेश्वरबारे सिकाउँदा परमेश्वरको नामबारे पनि बताउनुभयो।—यूहन्ना १७:२६ पढ्नुहोस्।
यी मायालु बुबाले झैं यहोवा परमेश्वरले हाम्रो चिरकालीन हितको लागि कदम चाल्दै हुनुहुन्छ
४. के यहोवा परमेश्वर हाम्रो चासो राख्नुहुन्छ?
संसारमा जताततै दुःखकष्ट छ। के यसको अर्थ यहोवा हाम्रो चासो नै नराख्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ त? हाम्रो परीक्षा लिनको लागि नै परमेश्वर हामीलाई दुःखकष्ट भोग्न दिनुहुन्छ भनेर कोही-कोही भन्ने गर्छन्‌। तर यो साँचो होइन।—याकूब १:१३ पढ्नुहोस्।
परमेश्वरले हामी मानिसहरूलाई स्वतन्त्र इच्छा दिएर हाम्रो कदर गर्नुभएको छ। यस्तो स्वतन्त्रता पाएकोमा हामी कृतज्ञ छौं र उहाँको सेवा गर्ने छनौट गर्छौं। (यहोशू २४:१५) तर थुप्रै मानिसहरू अरूलाई हानि पुऱ्याउने काम गर्ने छनौट गर्छन्‌। त्यसकारण मानिसहरूले दुःख पाइरहेका छन्‌। यस्तो अन्याय देख्दा यहोवा परमेश्वरको मन दुख्छ।—उत्पत्ति ६:५, ६ पढ्नुहोस्।
यहोवा हाम्रो चासो राख्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। हाम्रो जीवन आनन्दित भएको उहाँ चाहनुहुन्छ। अब छिट्टै उहाँले दुःखकष्टलाई र दुःखकष्ट दिनेहरूलाई नाश गर्नुहुनेछ। त्यतिन्जेलसम्म दुःखकष्ट रहन दिनुको ठोस कारण उहाँसित छ। त्यो कारण हामी पाठ ८ मा सिक्नेछौं।—२ पत्रुस २:९; ३:७, १३ पढ्नुहोस्।
५. हामी कसरी परमेश्वरको नजिक हुन सक्छौं?
उहाँसित प्रार्थनामा कुराकानी गरेर यहोवा हामीलाई उहाँको नजिक हुन निम्तो दिनुहुन्छ। हामी प्रत्येकलाई उहाँ चासो देखाउनुहुन्छ। (भजन ६५:२; १४५:१८) उहाँ क्षमा दिन तयार हुनुहुन्छ। हामी बेलाबेलामा चुक्ने भए तापनि उहाँलाई प्रसन्न पार्न हामीले गरेको प्रयास उहाँको नजरबाट लुक्दैन। त्यसैले हामीमा कमी-कमजोरीहरू भए पनि हामी परमेश्वरसँग साँच्चै नै नजिकको सम्बन्ध गाँस्न सक्छौं।—भजन १०३:१२-१४; याकूब ४:८ पढ्नुहोस्।
यहोवा परमेश्वर हाम्रो जीवनदाता भएकोले हामीले सबैभन्दा धेरै उहाँलाई नै प्रेम गर्नुपर्छ। (मर्कूस १२:३०) यहोवाबारे अझ धेरै सिकेर र उहाँले भनेझैं गरेर उहाँप्रतिको प्रेम देखाउँदा तपाईं उहाँसित झनै नजिक हुनुहुनेछ। —१ तिमोथी २:४; १ यूहन्ना ५:३ पढ्नुहोस्।